FIFANDONANA MAHERY VAIKA :: Zandary telo indray matin’ny dahalo • AoRaha
FIFANDONANA MAHERY VAIKA Zandary telo indray matin’ny dahalo
Miantso vonjy amin’ny mpitondra foibe ireo mpitandro filaminana any Amboasary Atsimo. Miverina sy miha mavaivay ny asan-dahalo, indrindra ireo nolazaina fa niova fo. Mitady tsy ho voafehy intsony ny fitandroana ny filaminana. Porofon’izany ny fifandonana mahery vaika tany Ianapaza-Maromby, omaly maraina, izay nahafatesana zandary telo ka manamboninahitra lefitry ny kaomandà Faneva ny iray.
“Herinandro vitsy lasa izay, dia nisy olona nilaza fa tsy misy ilàna ny Jado (ndlr: fikambanan’ireo dahalo niova fo) fa rava ireo ka tsy misy intsony. Naheno an’io ireo dahalo niova fo sasany dia lasa niparitaka. Nihamafy ny halatr’omby taty aminay, taorian’izay, satria tao anatin’ny herinandro taorian’io dia nahatratra folo ny fanafihan-dahalo. Nitohy tamin’io tranga, androany (ndlr : mantsy ny omaly) io ny asa ratsin’ireo dahalo izay tombanana hatrany amin’ny roanjato isa mahery no nifanandrina tamin’ireo zandary am-polony. Niparitaka ireo zandary rehefa nahita fa voahodidina izy ireo. Izy telo lahy ireo no niharitra hatramin’ny farany ka niafara tamin’izao nahafatesany izao”, hoy ny fitantaran’ny kaomandà Faneva, lehiben’ny Vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria, any Taolagnaro.
Manodidina ny 100km miala an’Amboasary Atsimo ary mbola misy dia an-tongotra am-polony kilaometatra maro no voalaza fa misy an’io toerana nisian’ny fifandonana mahery vaika tamin’ireo dahalo io. Hatramin’ny omaly, araka ny loharanom-baovao, dia mbola nogiazan’ireo dahalo ny vatana manga-tsikan’izy telo ireo.
Ny kaomandà Faneva no nilaza fa hidina any amin’io toerana io haka ireo razana, omaly hariva. “Efa nanao tatitra any amin’ireo lehibe isan-tsakojiny aho momba izao zava-nisy izao. Tsapa ho marisarisa ny fandriampahalemana aty aminay ka mila fepetra manokana”, hoy ity lehiben’ny zandarimaria any Taolagnaro ity.
AKANIN’NY ZANDARIMARIA :: Potiky ny afo ny tranon’ny ankizivavy kamboty
ADY AMIN’NY FAKANA AN-KERINY :: Ho arahi-maso manokana ireo voafonja